I-Horoscope yesibonakaliso seVirgin ngo-2010
Zama ukuguquguquka nokuqinisa inkululeko - ubudlelwano obufudumele buyabiza kakhulu! I-horoscope yesibonakaliso sezinsikazi ngo-2010 izojabulisa izilwane zayo ezifuywayo.
USepthemba yisikhathi sokubukeza ubudlelwane bomuntu siqu. Ngaphambi kokuba uqale kule nyanga, unqume ukuthi hlobo luni lobuhlobo obufunayo wena, futhi, ngokusekelwe kulokhu, khetha umugqa oqondile wokuziphatha. Kunesifiso sokumangala abanye ngokukhetha komthandi. Isikhathi sokubheka ama-halves angakhona-manje uyakwazi ukubona zonke iziphutha zabo ngaphandle kwezibuko ezinemibala e-rose. Engxenyeni yesibili yenkathi yezinkanyezi, ummangali wakho angabonisa izinhloso zakhe zangempela ezihlobene nezibopho. Ukusakaza okunamandla kwamandla wezocansi kungakukhipha ibhalansi - zama ukuguqula ibe yindalo.
NgoSeptemba, uzozizwa ngokuzwakalayo okudingayo, yimiphi imithi kanye nezindlela zokwelapha ezidingekayo kuwe manje. Uma usuvele uthola ukwelashwa, zama ukuwuqeda ngaphambi kokuphendukela kudokotela ukuze kungabikho ukuphikisana phakathi kwezinhlelo zokwelashwa. Bonisa ukulinganisela okunengqondo empilweni esondelene nayo, ngoba amandla akho angadliwa ngokungadingekile.
Ubudlelwano nobuholi buzokwenza amathuba engeziwe, kodwa eminyakeni eyishumi yokuqala kaSeptemba, umuntu kufanele agweme ama-angles acile futhi alandele ngokuqinile amalungiselelo. Izingqinamba zokuguquguquka zikhona emkhakheni wokusebenza, uzochitha isikhathi esiningi uthintana nabachwepheshe, ngesikhathi esifanayo funda izinto eziningi eziwusizo. Lapho uphetha izivumelwano nezinkontileka, sebenzisa ngokuqapha okukhulu, thintana nabangani bakho kanye nochwepheshe. Ikhono lokuhlanganisa izinhlobo eziningana zomsebenzi kuzosiza ukusebenzisa isikhathi ngokwengeziwe. Nje ungafuni kwabanye, musa ukusebenzisa kabi isikhundla sakho esisemthethweni. Izinqubo zomthetho zisongela umphumela ongaphumelelanga, izindleko zezezimali. Ngo-Agasti, kunethuba lokuhlehlisa imali, kodwa kusukela ngo-September 1 kuya kuSeptemba 7 ungakwazi ukuchitha ngisho nezibalo eziningi zenjabulo nokudala umuzwa wenduduzo. Kule nyanga, yonke imisebenzi yakho, igxile ekuqinisekiseni ingcebo yezinto ezibonakalayo, izohlala kuze kube nguSeptemba 14, emva kwalokho ongakwazi ukuphumula kancane - ingqondo yakho izozikhandla uma uyidinga.
Ugxile ekuvezeni amakhono akhe namakhono akhe. Umsebenzi wakhe nokunyakaza kungabonwa ngokubonga. Isipho sokukholelwa nokuqinisekisa sizokwenza i-Virgo ibe yingxenye ebambe iqhaza ezenzakalweni. Ukuzikhukhumeza kwakhe nokuphambana naye kunganciphisa futhi kubangele abantu abakuzungezile, ngoba abantu abambalwa bangakwazi ukuthola ukuhamba nokucabanga okunjalo. Uthando lomkhethiweyo wakho luzohlala phezulu cishe yonke inyanga, into esemqoka akumele ukunikeza izizathu zomhawu.
Yini ezoletha inhlanhla
Isimo sokuphila okusebenzayo nokuqaphela okusheshayo kwamacebo kuzoba yisihluthulelo sempumelelo. Ngaphambi kokuba uthathe isinyathelo, khetha ukuthi yini oyifunayo ngempela. Uma kungenjalo, ukunyakaza kwakho okuphambene nakho kuyoba yingozi. Hlanganisa amakhono akho angokwenyama ngekhono eliqinile lengqondo - bese ungakwazi ukugoqa noma yiziphi izintaba.
I-Element - Umhlaba. I-talisman - inhlamba, izofaka enkosini yakhe ukunganaki nokuhamba kahle okulahlekile. Imbali i-aster.
I-Horoscope ka-Mashi ngezibonakaliso ze-zodiac
I-Physiognomy: ukuma kobuso, ubuningi namashiya
Imibono engu-50 engashintsha impilo yakho
Ukuhlukaniswa ngothando, ukufunda ukuphila
I-Zodiac uphawu lwe-scorpion intombazane
U-Aquarius, unyaka wesifazane wesifo sezinkanyezi ngonyaka ka-2010
Indlela yokuhlela indawo yokusebenzela yomfundi
Indlela yokukhipha umonakalo endlini?
Isaladi eluhlaza ne-tuna ne-Feta ushizi
Ingaphakathi ngesitayela se-eclectic
Isitayela sefoni yebhizinisi
Izitsha zobisi: i-jelly, i-porridge, isobho
Ikhala legazi kanjani ukuyeka?
Inkukhu ebhakwa ne-ananas
Amakhukhi kaKhisimusi emaprotheni glaze
Zonke izindawo zenkinga, izivivinyo zezinsikazi
I-textile yokuvula ivulekile
Salting herring Po Vilkowski
Imibuzo evusa amadoda
Iyini i-Vintage Style Decoration?